I-china Duvet cover sets ne-pillowcase ne-Microfiber bedding set kanye ne-Queen bedding set ne-king bedding set abakhiqizi nabaphakeli | IHefei Super Trade
Amasethi ekhava ye-Duvet ne-pillowcase ne-Microfiber bedding set ne-Queen bedding set kanye ne-king bedding set
Isembozo se-Duvet Setha usayizi ogcwele / Usayizi weNdlovukazi onoziphu, Izinsimbi Zomduduzi weSoft Comforter Isetha izingcezu ezi-3 (1 iDuvet Cover + 2 Pillowcases), amasentimitha angu-90x90 noma ama-intshi ayi-104x90
Usayizi Indlovukazi (90 "x90") noma iNkosi (104 "x90")
Izinto 110GSM Microfiber zokulala isethi
Ukulinganisa--- Ikhava Yesembozo I-Set Usayizi ogcwele / Usayizi weNdlovukazi ngokuvalwa kwe-Zipper, Amasethingi Wokumboza Okuthambile aSetha izingcezu ezi-3 (1 iDuvet Cover + 2 Pillowcases), amasentimitha angu-90x90 noma ama-intshi ayi-104x90
Iphelele Isikhathi Esiqinile & Esithambile Sokuthinta --- Indwangu ye-microfiber eyi-100% yokunikeza ukuthamba okungafani nenduduzo unyaka wonke lapho usebenzisa. Induduzo yokulala ubusuku obuhle yiyona ebaluleke kakhulu uma kukhulunywa ngezembozo ze-duvet kanye nama-pillowcase. Lapha uzothola ukukhetha okukhulu kwesethi yokulala ye-microfiber, kufaka phakathi izinto ezithambile ezengeziwe eduze kukotini - Ikhava ye-Hypoallergenic duvet igcina umzimba wakho uhlanzekile ukuqinisekisa ukulala okuphumuzayo ubusuku bonke.
Ngaphandle kwalokho, amasethi wekhava yeDuvet nawo anemibala ehlukahlukene futhi, ngakho-ke ungaya kokuthandayo namhlanje bese ukushintsha noma kunini lapho uthanda khona.
Isibopho & Idizayini Yokuvala Yokuvikela Ukuvalwa - Vikela i-duvet yakho, i-quilt ne-comforter yakho ngokulingana okuqonde kude nokushelela. Vala i-quilt yakho yokunethezeka, umduduzi noma i-duvet esheshayo futhi elula kunokuvalwa kwenkinobho ejwayelekile ukusheshisa inqubo yokwenza umbhede wakho ngokuvalwa uziphu okude.
Ukunakekelwa Okulula Nemishini Engahlanzwa - Ukuwashwa komshini kubanda ngokwehlukana kumjikelezo omnene / obucayi. Tumble yomile phansi. Ubunjalo bendwangu eshwabene bukhona isitayela sokuthokomala nesokuvuna. Akukho uku-ayina okudingekayo ukugcina ukuthungwa okushwabene.
Langaphambilini amaphijama wokulala akhumule amaphijama nabafana nezindawo zokulala
Olandelayo: ishidi elifanele kanye nesethi yokulala yeMicrofiber
Amasethi wekhava ye-Duvet
inkosi zokulala isethi
Isethi yokulala yeNdlovukazi
Umgijimi wetafula, Ubisi Flannel Duvet Cover, ithawula lasekhishini, Indwangu yetafula le-PEVA, Isethi yokulala ye-Microfiber, Isethi yokulala yoboya bamaCoral,